आज देशभर २८८ जनामा कोरोना संक्रमण Canada Nepal
चितवनको माडीमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु
आज देशभर २८८ जनामा कोरोना संक्रमण
चैत्र २७ २०७७
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप २८८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका २८८ सहित कूल संक्रमितको संख्या २ लाख ७९ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १२७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ७३ हजार ७ सय ३५ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय १५ रहेको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा कोहि पनि संक्रमितले ज्यान गुमाउनु नपरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपाल आजसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३,०३८ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत्र २७, २०७७ शुक्रवार १६:२३:२८ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । आइतबार साझँ नेता रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफु कोरोनामुक्त भएको जानकारी दएका छन् ।
उनलाई २० दिनअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । नेता रिजालले आफु कोरोनामुक्त भएको भन्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने आफन्तजनहरू, नेताहरू, शुभेच्छुकलगायतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
रिजालले उच्च मनोवल भएमा कोरोनालाई जित्न सकिने बताएका छन् । उनले भने - "यस विपद्को घडीमा उच्च मनोवल र आवश्यक सावधानीका साथ कोभिडविरूद्धको लडाइँ लड्न र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न म सबैलाई अपिल गर्दछु ।"
उनको स्टाटस यस्तो छ - "बीस दिनपछि आज कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको छु । यसबीचमा विभिन्न माध्यमबाट मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुने प्रिय आफन्तजनहरू, आदरणीय नेताहरू, शुभेच्छुकलगायत सबै मित्रहरूप्रति आभारी छु । यस विपद्को घडीमा उच्च मनोवल र आवश्यक सावधानीका साथ कोभिडविरूद्धको लडाइँ लड्न र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न म सबैलाई अपिल गर्दछु ।"
जेठ २, २०७८ आइतवार १९:५६:४१ बजे : प्रकाशित
नेपालमा कोभिड बिरामीका लागि कति अक्सिजन अभाव भइरहेको छ, के सिलिन्डर थपिनु समाधान हो ?
काठमाडौँ। कोरोनाभाइरस महामारीबीच हाल नेपालमा उपलब्ध रहेका अक्सिजन सिलिन्डरको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढ्ता माग भइरहेको अधिकारी एवं व्यवसायीले बताएका छन्। काठमाण्डू उपत्यकामा ६ हजार सिलिन्डर दैनिक रूपमा व्यावसायिक उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने गरेका छन् भने २,५०० हाराहारीमा अस्पतालहरूले सिलिन्डर तयार पार्छन्।
बाँकी दश हजार हाराहारीमा काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “अहिले नियमित आपूर्तिमा दैनिक ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।” व्यवसायीहरूले भने अहिलेको माग दैनिक ५० हजार सिलिन्डरसम्म पुगेको बताएका छन्।
के गरिएको छ ?
यसबीचमा नेपालले चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी गरेको जनाएको थियो। जसअन्तर्गत २ हजार चीन सरकारले अनुदानमा दिने र १८ हजार किनेर ल्याइने बताइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म चीनबाट दुई पटकमा गरेर आठ सय सिलिन्डर हवाई उडानमार्फत् आएका छन्। त्यसैगरी खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सहयोगमा ओमानबाट ५५५ सिलिन्डर नेपाल आइपुगेको बताइएको छ।
सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, “चीनबाट सुरुमा चार सय सिलिन्डर खाली आएका थिए। तर सरकारले अब जहाँबाट पठाए पनि अक्सिजन भरिएकै पठाउन भनेको छ। त्यसले नेपालमा चाप बेहोरिरहेको मागलाई केही सहज बनाउँछ।”
नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमिल्सिना खाली सिलिन्डरहरूको जोहो गर्ने काम भारतमा महामारी सुरु हुँदादेखि नै गर्न सकिएको भए अहिलेको जस्तो चाप नपर्ने ठान्छन्। उनी भन्छन्, “अहिले सिलिन्डर भयो भन्दैमा जति पनि भर्न सकिने भन्ने हुँदैन। भारतमा अवस्था बिग्रन लागेका बेला नै हामीले थप सिलिन्डरहरू भरेर राख्न सक्नुपर्थ्यो।”
अक्सिजनका लागि बढिरहेको हाहाकारबीच आइतवारको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नभन्न आग्रह गरिएको बताएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बीबीसीलाई भने, “त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमै त्रास र भय देखिन थालेपछि हामीले त्यस्तो आग्रह गरेका हौँ।”
नेपालमा विगत केही दिनमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या केही कम भइरहेको देखिए पनि अक्सिजनका लागि चाप कम भएको अवस्थाका त्यसलाई बुझ्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। डा. अधिकारी थप्छन्, “उद्योगहरूबाट जति सिलिन्डर भरिएर गएका छन् ती त्यही सङ्ख्यामा नफर्कँदा समेत समस्या थप जटिल बनेको हो।”
नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घका महासचिवले ग्यास उद्योगअघि सोझै बिरामीका आफन्तहरू आएर अक्सिजनका लागि हाहाकार गर्न थालेपछि आफूहरूका आपूर्ति चक्र पनि बिथोलिएको बताउँछन्। तिमिल्सिना भन्छन्, “कसलाई अत्यावश्यक भन्ने ठम्याउन नसकी भद्रगोल तरिकाले वितरण गर्नुपर्‍यो।”
नेपालमा अहिले सरकारी र निजी गरेर ३२ वटा अस्पतालका मात्र आफ्ना अक्सिजन प्लान्ट छन्। चारवटा अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छन्। डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “ती अस्पतालहरूका क्षमता नै पनि अहिलेको उच्च मागलाई थेग्न सक्ने नभएकाले सिलिन्डर अक्सिजनतर्फ चाप बढेको हो।”
चाप बढेपछि कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले दैनिक कोटा छुट्ट्याएर अस्पतालहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन थालेपछि झन् अस्तव्यतता बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
नेपालमा चीनबाट व्यावसायीहरूले किनेका केही हजार सिलिन्डर आउने क्रममा रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सङ्घका महासचिव तिमिल्सिना भन्छन्, “अहिले हामीसँग दैनिक ४० देखि ५० हजार अक्सिजन सिलिन्डरको माग छ जबकि देशभरि दैनिक अधिकतम १७ देखि १८ हजार सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ।”
जेठ ३, २०७८ सोमवार ०९:४०:०५ बजे : प्रकाशित
# अक्सिजन सिलिन्डर
# कोभिड बिरामी
बैतडीमा थप १५ दिन निषेधाज्ञा
काठमाडौँ। बैतडीमा थप भएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू भएको छ । थपिएको निषेधाज्ञा यही जेठ १७ गतेसम्म लागू हुनेछ । आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञालाई १५ दिन थप गर्दै जेठ १७ गतेसम्म कायम गरेका हुन् । यसअघि बैतडीमा वैशाख २० गतेदेखि जेठ २ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गरिएको थियो । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार जेठ १७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार ११:११:२० बजे : प्रकाशित
चितवन । माडीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका(५, पिपरिया निवासी ६० वर्षीय बृद्ध पुरुष रहेका छन् ।
उनको आइतबार बिहान ३:३५ बजे भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
निमोनियाको समस्या भई जेठ २ गते दिउँसो १२ बजे अस्पताल भर्ना भएका उनमा सोही दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यससँगै माडीमा कोरोनाको दोश्रो लहर सुरु भएदेखि मृतकको संख्या ५ पुगिसकेको छ ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १२:४१:५४ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । भारतसहित संसार कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)को नयाँ नयाँ स्वरुपको संक्रमणको चपेटामा परेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध बनेका केही खोप प्रयोगमा पनि आएका छन् । तर, कोरोना संक्रमणमा भने कमि आएको छैन ।
यही बेला नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले कोरोनाभाइरस विरुद्ध तयार पारेको औषधि सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कोरोनाभाइरसविरुद्धको औषधि ‘२–डीजी’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुका लागि २–डीजी ग्लूकोज औषधि निकै प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उक्त औषधिको प्रयोगले संक्रमित चाँडै संक्रमणमुक्त हुने मन्त्री सिंहले आशा व्यक्त गरे ।
२–डीजी ग्लूकोज औषधि भारतको रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन (डीआरडीओ)ले बनाएको हो । यसलाई भारत सरकारले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । तर, हालसम्म सामान्य प्रयोगका लागि भने अनुमति दिइएको छैन ।
पाउडरको रूपमा तयार पारिएको उक्त औषधि सबैभन्दा पहिले डीआरडीओ कोभिड अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई प्रयोग गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाललाई कस्तो फाइदा ?
भारतमा तयार भएको २–डीजी ग्लूकोज औषधि कोरोना संक्रमितका लागि प्रभावकारी भए नेपाल पनि लाभावन्तित हुने जानकारहरु बताउँछन् । गत जनवरी १६ देखि खोप अभियान सुरु गरेको भारतले एक हप्ता नपुग्दै १० लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।
भारतमा संक्रमण बढ्दा नेपालमा प्रभाव पर्ने तथा नेपालमा बढ्दा भारतलाई असर गर्ने भएकाले भारतले नेपाललाई चाँडै औषधि उपलब्ध गराउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भएकाले पनि भारतको प्राथमिकतामा नेपाल रहने जानकारहरुको भनाइ छ ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १३:४७:२७ बजे : प्रकाशित